ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက် ရောက်ရှိနေသူတွေ ပြန်လည်စိစစ်လက်ခံရေး ဆွေးနွေး | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက် ရောက်ရှိနေသူတွေ ပြန်လည်စိစစ်လက်ခံရေး ဆွေးနွေး
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက် ရောက်ရှိနေသူတွေ ပြန်လည်စိစစ်လက်ခံရေး ဆွေးနွေး
မြန်မာဘက်ကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ကို ရောက်ရှိနေသူတွေ ပြန်လည်စိစစ်လက်ခံရေးနဲ့ နှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်ဖက်ဆက်လက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးတို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Asaduzzaman နဲ့ အဖွဲ့ကို လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။
အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုထဲမှာပဲ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးတို့ဟာ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ဘကျ ရောကျရှိနသေူတှေ ပွနျလညျစိစဈလကျခံရေး ဆှေးနှေး
မွနျမာဘကျကနေ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ဘကျကို ရောကျရှိနသေူတှေ ပွနျလညျစိစဈလကျခံရေးနဲ့ နှငျ့ပတျသကျ၍ နှဈဖကျဆကျလကျ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျဖို့ နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးတို့ ဆှေးနှေးခဲ့ကွပါတယျ။
အောကျတိုဘာ ၂၅ ရကျနမှေ့ာ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျက နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာနမှာ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့နိုငျငံ၊ ပွညျထဲရေးဝနျကွီး H.E. Mr. Asaduzzaman နဲ့ အဖှဲ့ကို လကျခံတှဆေုံ့စဉျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွတာပါ။
အဲ့ဒီတှဆေုံ့မှုထဲမှာပဲ နိုငျငံတျော အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနဲ့ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ပွညျထဲရေးဝနျကွီးတို့ဟာ နှဈနိုငျငံအကွား ဖွဈပျေါနတေဲ့ နယျစပျဒသေလုံခွုံရေးနဲ့ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျတှကေိုလညျး ဆှေးနှေးခဲ့ကွပါတယျ။
Previous articleဆီးရီယားအရေး လုံခြုံရေးကောင်စီ မှုကြမ်းကို ရုရှား ဗီတိုအာဏာ သုံး
Next articleရခိုင်အရေးမှာ ကြမ်းတမ်းစွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတယ်လို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ပြော